हेर्नै नसकिने परि तामाङको भिडियो सार्बजनिक एक्लै हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – Khabar Patrika Np
हेर्नै नसकिने परि तामाङको भिडियो सार्बजनिक एक्लै हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २४, २०७७ समय: २२:५८:५७
समाचारको भिडियो अन्तिममा छ ।
कृपया पूरा हेर्नुहोला।त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात थियो । म पहिलो पटक कुनै पुरुषको अँगालोमा बाँधिनु पर्ने थियो । बिहे अघि नै मैले यो रातको बारेमा नजिकका साथीहरूसँग कुरा गरेकी थिएँ ।
त्यति बेला भने बिहेअघि मैले हेरेका निलो चलचित्रका दृश्यहरू अस्पष्टरुपमा मेरा आँखा अगाडि नाचिरहेका थिए । म रोमाञ्चित भइरहेकी थिएँ ।सजाइएको गिलासमा हालिएको दूधलाई हातमा लिएर शिर निहुराउँदै म कोठामा पसेँ ।
अहिले सोच्दा पनि त्यो क्षण अत्यन्त परम्परावादी थियो । त्यति बेलासम्म मलाई थाहा थिएन, मैले एउटा अकल्पनीय झ’ट्का व्यहोर्नु पर्नेछ भनेर ।उनीहरू आफ्ना मित्रको काँधमा शिर राखेर थ’काइ मे’टाइ रहेका हुन्थे, हातमा हात राखेर हिँडिरहेका हुन्थे ।
एत्यो देख्दा मलाई ई’र्ष्या लागेर आउँथ्यो त्यो घट’नाले मलाई निकै दुखित बनायो । मेरो कल्पनामा थियो । जब म कोठाभित्र पुग्ने छु अनि तत्कालै मेरा पतिले मलाई बलियोसँग समात्ने छन्, मेरा शरीरभरि चु’म्बन गर्ने छन् तथा हामी सौम्य तरिकाले रातभरि मायामा बाँ’धिने छौँ ।
तर वास्तविकता फरक थियो, म कोठोमा आउनुअघि नै मेरा पति निदाइ सकेका थिए । त्यस बेला म ३५ वर्षकी थिएँ र कुमारीत्व पनि गुमाएकी थिइन । मेरो पतिको व्यवहार पी’ डादायक थियो । म कलेजमा पढ्दा र कार्यालयमा जाँदा धेरै केटा–केटीहरू गहिरो मित्रतामा बाँ’धिएका देखिन्थे ।
उनीहरू आफ्ना मित्रको काँधमा शिर राखेर थकाइ मेटाइ रहेका हुन्थे, हातमा हात राखेर हिँडिरहेका हुन्थे । त्यो देख्दा मलाई ई’र्ष्या लागेर आउँथ्यो । के म पनि आफ्नो जीवनमा त्यस्तै साथीको खोजीमा त थिइन ।
महिलाले गरेका साना गल्तीलाई पनि यो समाजले ठुलो बनाएर प्रचार गर्छ तर पुरुषको ठुलो गल्ती हुँदा पनि महिलालाई त्यो गल्तीको भागीदार बनाइन्छ । कस्तो वि’डम्बना ?मेरो परिवार ठुलो थियो । ४ दाजुभाइ एक बहिनी अनि बुढा आमा–बाबा । तर, म एक्लो महसुस गरिरहेकी थिएँ ।
के अब म सधैँका लागि एक्लै बस्ने ?के कुनै दिन मेरो कुमा-रीत्व भ-ङ्ग हुन्छ होला ? यस्ता प्रश्नहरूले सधैँ मेरो मस्तिष्कलाई त-नाव दिइरहेका हुन्थे मेरा सबै भाइबहिनीहरूको बिहे भइसकेको थियो । उनीहरूको आफ्नै परिवार थियो ।
कहिले काहीँ सोच्थेँ, के उनीहरूलाई मेरो बारेमा केही वास्ता होला ? मेरो ढल्कँदो उमेर हेर्थेँ र अब एक्लै जीवन बिताउनु पर्ने हो कि भन्ने कल्पनाले नै तर्सन्थेँ ।
एकाङ्की जीवनका कारण कहिले काहीँ मेरो मन साह्रै दु’ख्थ्यो पनि ।अनि कसैको मायाका लागि त’ड्पिन्थ्यो पनि । तर, मेरा वरिपरि एकान्त बाहेक केही थिएन । कहिले काहीँ लाग्थ्यो, यी सबै दुखका पछाडि कतै म मोटी हुनु त कारण छैन ? के पुरुषले मोटी महिलालाई मन पराउँदैनन् ?।
के मेरा परिवारले मसँग मिल्दो जुल्दो एउटै केटो पनि खोज्न सक्दैनन् अब ? के अब म सधैँका लागि एक्लै बस्ने ? के कुनै दिन मेरो कुमा-रीत्व भ-ङ्ग हुन्छ होला ?यस्ता प्रश्नहरूले सधैँ मेरो मस्तिष्कलाई त-नाव दिइरहेका हुन्थे ।
जब म ३५ की भएँ, ४० कटिसकेका एक जना पुरुष मसँग विवाह गर्न राजी भए । हाम्रो कुरो छिन्ने दिन मैले ऊसँग आफ्ना सारा भावना पोखेँ तर उसले मेरा कुरालाई वास्तै गरेन।
उ केही अ’त्तालिए झैँ देखिन्थ्यो तथा आँखाले एकटक भुइँ हेरिरहेका थिए र बेला बेलामा टाउको कन्याउँदै चुपचाप बसिरहेको थियो ।
मैले सोचेँ पुरुषहरू महिलाभन्दा अलि कमै बोल्ने हुन्छन् । शालीन हुन्छन् ।अनि मलाई लाग्यो, मेरो हुनेवाला पति पनि त्यस्तै होलान् । तर, बिहे भएको पहिलो रातमा म द्वि’विधामा परेँ तथा मैले थाहा पाउन सकिन,